Ny volana malagasy sy ny tononandrony: Manana ny orim-bintana mifanandrify aminy – fanilo
Toy ny firenena rehetra, manana izay iheverany ho fihodinkodina��ny tany izay diaviny koa ny Malagasy. Nisy, araka izany, naA� mbola tsy nisy oniversite aza, tamina��ny androna��ny Ntaolo, ny mpandinika manokana ny fihodina��ny eny amina��ny habakabaka eny sy ny fifandraisana��ny olombelona amina��izany. Araka ny voalaza ao amina��ny boky a�?Fomba malagasya�?, ny mpanandro no mamantatra ny tononandrona��ireo zaza teraka, tamina��ny alalana��ny fandinihana ny volana. Araka ny filaharany avy, ny Alahamady no anaram-bolana voalohany indrindra. Manaraka azy avy eo ny Adaoro, ny Adizaoza, ny Asorotany, ny Alahasaty, ny Asombola, ny Adimizana, ny Alakarabo, ny Alakaosy, Adijady sy Adalo ary Alohotsy. Miankina amina��ny vitana��ny tsirairay koa ny orimbato amina��ny rindrin-tranona��izy ireo. Ny Adijady izay mifanandrify amina��ny vintana Sakara sy ny Adalo, izay mifanandrify amina��ny volambita na taombaovao ary ny Alohotsy sy ny Alahamady, izay samy mifanandrify amina��ny asaramanitra, ohatra, samy mitodika mianavaratra avokoa. Ny Alakaosy (Sakamasay) sy ny Alakarabo ( Hia) dia any andrefana.
bodybuilding free video barbell deadlift bodybuilding and cardio